Taariikhda My Butros » Waa maxay Haweenka fikir marka galmada
Inkastoo galmada waa gaar ah, saaxiib, in-the-xilligan fal, mararka qaarkood, oyna haweenka u muuqdaan in ay dhumiyaa, iyadoo aan loo eegayn sida weyn jinsi ah waa. Hoos ka mid yihiin fikirrada oo u soo galin karin maskaxda ah haweenka xilliga galmada.
TV Shows / Movies: Haddii aad hadda uun daawaday filim aad u weyn ama waa dhexe ee taxanaha TV a, mararka qaarkood, dib u qiimayn ku dhagarta iyo jilayaal ay dhacaan inta lagu jiro galmada. Waxaan u caawin karin haddii aan haysanno “a-ha” xilligan dhexe ee jinsiga, waxay ka dhigan tahay oo keliya in jinsi ah waa dhiirigalin in.
Casho: Laakiin, haddii ay dhacdo in aad xaaqin aad marwada off cagaheeda sida ugu dhakhsaha badan ayay u soo galo albaabka ka shaqo fursadaha maalin yihiin ayay u fikiri doonaa casho inta aad gudaha iyada ah. Waxaan u caawin karin haddii aan awoodno in aan multitask, oo lagu daray aynu noqon daacad ah, galmo caadi ahaan la shaqeeyaa ilaa calooshooda iyo garashada waxa aad doonaysid inaad samaysid ayaa kaa caawin doona heli casho diyaar u ah in si deg-deg.
Bedelaada Mawaaqif: Aan ay wajahayaan, mararka qaarkood waxaan nahay off-oolin marka partners. Waxaa si gaar ah sii daran yahay marka hal rafiiq riyaaqaya u badan oo kale oo ku. Marka Mudanayaal arki guys ay aad u galeen meel gaar ah, aanay soo jeedin doonaa mid cusub tan iyo markii ay naga raalli ahaanshihiisa ka yimaadaa qaadashada nin gunta. Marka ay taasi dhacdo, fikirrada “Waxa uu sidoo kale waa galay kusugantahay in la beddelo. Waxaan ku qasbanahay inaan iska dhigaya inay u galay oo kaliya inta uu yahay”, “sababta aan u sameyneynaa in hal meel cusub oo aanu isku daynay kaliya oo jecel yahay?”, iyo / ama “toogtaan, sababta aanu meel ay tani dhaawacayso?” arbushin galay waxay maskaxdeena.
Jagooyinka cusub: Inkasta oo ay u bedesheen ilaa sariirta mar walba waa fikrad fiican, ma dhammaan jagooyinka waa sida ugu fudud ee ay u muuqdaan. Waxaa muhiim ah in aad leedahay maad iyo qosol, gaar ahaan marka jagooyinka kaliya ka muuqanin wax aad u shaqeeyaan. From “Waxa uu si qalad ah u simbiriirixan in godka qaldan” si ay u “mid ka mid naga mid ah ay gaari karaan isxidho ee aan ka dhicin” si ay u “Waxaan qabaa inaan fart laga yaabaa hadii aan u sii socono waxaa at sidan oo kale”, dhammaantood waa fikirro in laga yaabo mari kartaa, oyna haweenka.
Orgasms: Ladies, aynu wada ognahay in mararka qaar aan gunta noo nin ka hor. In kasta oo aan ku noqon karaan dhacdo joogto ah, waxa aanu dhici waqti ka waqti. Oo intuu, xitaa ka dib lagu naafeeyo, jinsi dareensan cajiib ah, waxaan sidoo kale doonayaan in ay raalli lammaanaha. Waa waqti xaadirkaas marka dumarka qabaa “Haddii aan la taahaa buunkii, waxaa laga yaabaa in kaa caawin doona isaga gunta”.
Xayawaanka: Dhammaanteen waxaan jeclahay xayawaanka guriga sidii ay tahay xubin aad u gaarka ah ee qoyska. Sababta oo ah in aan caado u tahay albaabka u furay marka galmada sida meows, dalaka ruushka, xoqxoqaan ee albaabka marka galmada carqalad ku keeni karaan niyadda ka. Si kastaba ha ahaatee, iyadoo doorashada this yimaado martiqaadka in saaxiibkaa feeri aad daawato laga yaabaa in galmo. Waa marka aan soo jiitey indhaha caalamka in aan qabaa “Waxaan haysan karaa galmo la xayawaanka igu daawashada” ama “Waa maxay sababta uu isagu / iyadu u dhaqaaqo dhow noo? Ma doonayo in aan noo galmo si aad u kala gooyey”.
Ha cabsanina, ragga sida xataa sida afkaartaan maraan, oyna haweenka, jinsi weli waa mid aad u xiiso leh. Oo dumarkiina, aad u baahan tahay ka welwelin aad sida aan waa kan keliya oo multi-maleeyo marka galmada.